Umkhiqizi we-powder ohamba phambili we-J-147 (1146963-51-0) - iCofttek
ICofttek ingumkhiqizi omuhle kakhulu we-J-147 eChina. Ifektri yethu inohlelo oluphelele lokuphathwa kokukhiqiza (i-ISO9001 & ISO14001), enekhono lokukhiqiza lanyanga zonke elingu-120kg.
I-J-147 (1146963-51-0) Siziqu
Isisindo Yamamolekhula: I-350.341 g / mol
Igama lamakhemikhali: 2,2,2-Trifluoroacetic acid 1-(2,4-Dimethylphenyl)-2-[(3-methoxyphenyl)methylene]hydrazide
omqondofana: I-N- (2,4-Dimethylphenyl) -2,2,2-trifluoro-N '- [(E) - (3-methoxyphenyl) methylene] acetohydrazide
InChI Key: I-HYMZAYGFKNNHDN-SSDVNMTOSA-N
Ukuphila okungaphelele: I-1.5 hrs ku-plasma ne-2.5 hrs ebuchosheni
Umswakama: Soluble to 100 mM in DMSO and 100 mM in ethano
Isicelo: I-J-147 powder ngumuthi omusha wokuhlola owenziwa njengokwelashwa okungenzeka kube yisifo se-Alzheimer's.
ukubukeka: Okumhlophe kwe-off-white powder
I-J-147 (1146963-51-0) I-NMR Spectrum
Yini i-J-147 (1146963-51-0)?
I-J-147 powder yisidakamizwa esisha sokulanywa esakhiwa njengendlela yokwelapha yesifo i-Alzheimer's. Kuze kube manje, izivivinyo ezenziwe kumagundane zibonisa isithembiso esiningi. I-J147 ibike imiphumela ekubuyiseni emuva imiphumela yokuwohloka komqondo kanye ne-Alzheimer's kumodeli yegundane. I-J147 ithatha indlela ehlukile ngokuqhathanisa nezinye izidakamizwa eziningana zeNootropics nezika-Alzheimer's. I-J147 izama ukususa ama-plaque amana engqondweni. Abaphenyi baphinde babone ukuthi i-J147 inamandla wokulungisa ezinye izindaba ezimbalwa zokuguga kokuphila, hhayi ukulahleka kwememori kuphela. Umuthi ungasiza ukuvikela ukuvuza kwegazi kusuka kuma-microvessels, njengoba kukhonjisiwe ngezivivinyo zamagundane ezenziwe kuze kube manje. Umuthi waqala ukwenziwa ngonyaka ka-2011. Kusukela lapho, kwenziwa izivivinyo kumagundane kodwa asikaze sibheke noma yiziphi izivivinyo zokwelashwa ezenzelwe abantu. Kodwa-ke, olunye ucwaningo olushicilelwe ngonyaka odlule luveza isithombe esihle kakhulu sokuthi i-J147 isebenza kanjani ngaphakathi kwengqondo yomuntu. Ngokusho kwephepha, umuthi ubopha ne-protein mitochondria. Amaseli e-Mitochondria kwesinye isikhathi anesibopho sokukhiqiza amandla. Isenzo se-J147 kubo sithuthukisa ukuvuselelwa kweseli. Lokhu kuvuselelwa kubalulekile ekubuyiselweni ekulahlekelweni kwememori nasekuthuthukiseni impilo yengqondo ephelele.
J-147 (1146963-51-0) izinzuzo
Kwangathi Kungabuyiselwa Ukuphazamiseka Kwengqondo Brain
I-J147 ikhombise isethembiso esiningi sokubuyisa imiphumela yokuphazamiseka kwengqondo kwe-neurodegenerative efana ne-Alzheimer's nabanye. Ekuhlolweni okwenziwe kumamodeli wegundane kuze kube manje, isidakamizwa sikhombisile imiphumela emihle kakhulu ekubhekaneni nalezi zimo.
I-J147 isebenza ngokusiza amaseli ebuchosheni bobuchwephesha, azenze zincane futhi zisebenze kakhulu kunamaseli amadala. Kodwa-ke, kubalulekile ukuqaphela ukuthi azikho izivivinyo zabantu ezenziwe ngemiphumela ye-J147. Ngethemba ukuthi lokho kuzokwenzeka maduze kepha umuthi usatholakala ngokuthengiswa njengempuphu kubathengisi abakhethiwe abasebenza online.
Kuthuthukisa isenzo seMitochondria nokuphila isikhathi eside
I-J147 isebenza ngokubopha i-mitochondria, amangqamuzana abhekele ukukhipha amandla emizimbeni yethu. Isenzo se-J147 sisiza ukuvikela ukucindezela kwe-oxidative kumaseli we-mitochondria, okuholela ekusebenzeni kwamaseli okungcono kanye nokuphila isikhathi eside.
I-J147 iphinde isize ekunciphiseni ama-metabolites anobuthi angadala i-cell excitotoxicity, inqubo amaseli afa ngayo ngokuba nesasasa ngokweqile. Lokhu kuvumela amangqamuzana akho ukuba ahlale emisha futhi enempilo isikhathi eside. Eqinisweni, eminye imikhondo eyenziwe ngezifundo zezilwane ikhombisile ukuthi ukuphathwa kwe-J147 ngezimpukane zezithelo kwandise isikhathi sayo sokuphila ngo-9.5 kuye ku-12.8%.
I-J147 ikhombise nesithembiso esiningi phakathi kwamamodeli egundane wokuhlola ekwandiseni inkumbulo. Umuthi ubuye wasiza nokubuyisa ukusilela okunamandla kwengqondo ezifundweni zokuhlola ezindala ngenkathi kwenziwa izifundo zocwaningo.
Abaphenyi bakholelwa ukuthi le miphumela ingaphindwaphindwa kwizifundo zabantu. Kunobufakazi futhi obukhombisa ukuthi i-J147 ingahlolwa njengendlela yokwelapha yememori yendawo engaba khona.
Ivikela ama-Neurons futhi Isiza Ukukhula Kwengqondo
I-J147 futhi inezakhiwo ze-neuroprotective ezivimbela isenzo se-oxidative ngaphakathi kwamaseli. Lokhu kusiza ukuvikela ama-neurons ekulimaleni okungenzeka. I-J147 nayo ingaba yisisusa sokukhula kobuchopho. I-J147 futhi ingathuthukisa i-synaptic plasticity ebuchosheni, okuholele ekukhuleni.
I-J-147 (1146963-51-0) kusebenzisa?
Isengezo se-J-147 sithuthukisa inkumbulo yendawo neyesikhathi eside. Isidakamizwa siguqula ukukhubazeka kwengqondo phakathi kwabantu asebekhulile abanenkinga yokukhubazeka kwengqondo. I-J-147 iyathengiswa itholakala njengomthamo wokuthenga futhi isizukulwane esisha siyayithatha ukukhulisa amandla okufunda. Ukuthatha imishanguzo yokulwa nokuguga ye-J-147 nakho kuzothuthukisa inkumbulo, umbono, nokucaca kwengqondo.
Ukuphathwa Kwezifo Ze-Alzheimer's
I-J-147 isiza iziguli ezine-Alzheimer's ngokwehlisa ukuqhubeka kwesimo. Isibonelo, ukuthatha isengezo kunciphisa amazinga we-beta-amyloid encibilikayo (Aβ), okuholela ekungasebenzi kahle kwengqondo. Ngaphandle kwalokho, i-J-147 curcumin modulates signaling neurotrophin ukuqinisekisa ukusinda kwe-neuronal, ngakho-ke, ukwakheka kwememori nokuqonda.
Iziguli ezine-AD zinezici ezimbalwa ze-neurotrophic. Kodwa-ke, ukuthatha isengezo se-J-147 Alzheimer's kukhulisa i-NGF ne-BDNF. Lawa ma-neurotransmitters asiza ukwakheka kwememori, ukufunda, nokusebenza kwengqondo.
I-J-147 (1146963-51-0) isilinganiso
Izifundo ezahlukahlukene zisebenzise imithamo ehlukene kumagundane, kepha esinye sezifundo ezibuyekezwe kangcono sanikeza amagundane i-10 mg / kg yesisindo somzimba ngosuku. Olunye ucwaningo lusebenzise imithamo ye-1, 3 noma i-9 mg / kg, futhi lathola imiphumela encike kumthamo, imithamo ephakeme isebenza kangcono.
Kodwa-ke, ukuhumushela lokhu kumthamo womuntu kudinga ukulungiswa kwendawo engaphezulu komzimba. Ngokwefomula yokuguqula esetshenziswa kakhulu, isilinganiso esilingana nomuntu kufanele silingane nomthamo wegundane ohlukaniswe ngo-12.3 – noma .81 mg ngekg yesisindo somzimba ngosuku.
Lokho kungu-.36 mg we-J147 ngephawundi yesisindo somzimba ngosuku. Lokhu kungaba ngama-36 mg ngosuku kumuntu oyiphawundi eyikhulu, ama-54 mg womuntu ongamakhilogremu ayi-150, noma ama-72 mg womuntu ongamakhilogremu angama-200.
Kodwa-ke, ezinye izifundo zithole imiphumela emihle evela emithamo ephansi kakhulu, futhi njengoba unikezwe ukuthi i-J147 ihlose ubuchopho, akucaci ngokuphelele ukuthi umthamo uzokala ngokuphelele ngokuya ngosayizi womzimba.
Ngakho-ke, lezi zinombolo kufanele zibhekwe njengemikhawulo ephezulu, futhi kunezizathu zonke zokukholelwa ukuthi u-10 kuye ku-20 mg ngosuku kufanele wenele ukuba nomphumela othile.
J-147 powder ukudayiswa(Ungathenga kuphi i-J-147 powder ngobuningi)
Singumhlinzeki we-powder we-J-147 ochwepheshe iminyaka eminingana, sihlinzeka ngemikhiqizo ngentengo yokuncintisana, futhi umkhiqizo wethu usezingeni eliphakeme kakhulu futhi uhlolwa ngokuqinile, nokuzimela ukuqinisekisa ukuthi kuphephile ukusetshenziswa emhlabeni wonke.
 "Isilingo sokuhlola izidakamizwa ezibheke i-Alzheimer's sikhombisa imiphumela yokulwa nokuguga" (Abezindaba). ISalk Institute. 12 Novemba 2015. Ibuyiswe ngoNovemba 13, 2015.
 UBrian L. Wang (13 Novemba 2015). "Isilingo sokuhlola izidakamizwa ezibheke isifo i-Alzheimer's sikhombisa imiphumela yokulwa nokuguga ekuhlolweni kwezilwane". obsibalme.info Ibuyiswe ngoNovemba 16, 2015.
 USolomon B (Okthoba 2008). "I-Filamentous bacteriophage njengethuluzi lokwelapha lokwelapha ukwelashwa kwezifo ze-Alzheimer". Ijenali Yesifo Se-Alzheimer's. 15 (2): 193–8. I-PMID 18953108.